Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea oo iska xaadiriyey finalka tartanka Europa League… +SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea oo iska xaadiriyey finalka tartanka Europa League… +SAWIRRO
Bashiir May 10, 2019
( Europe) 9 Maajo 2019 Kooxda Arsenal ayaa iska xaadirisay finalka tartanka Europa League kaddib markii ay guul raaxo leh ay ka gaareen Kooxda Valencia kaddib ciyaar labada kulan ku soo dhamaatay 7-3.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana lagu kala nastay bar-baro gool 1-1.
Kooxda reer Spain ee Velancia ayaa la hormartay goolka waxaana u dhaliyey xidiga reer Farance ee Gameiro kaddib caawin uu ka helay Rodrigo daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta.
Taageerayaasha kooxda Velencia ayaa aaminay in ciyaartoydooda ay keeni karaan goolasha deenta ee lagu lee yahay madaama ay ku soo galeen dar dar xoogan.
Nasiib wanaag Kooxda Arsenal ayaa durba heshay goolka bareejada ee ciyaarta waxaana u dhaliyey Aubameyang kaddib markii uu caawin ka helay Lacazette daqiiqadii 17 aad ee ciyaarta.
Xaakimka ciyaarta ayaa soo gaba gabeeyey qeebtii hore ee ciyaarta, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Arsenal ayaa sare u siiqaaday rajadeeda in ay xaqiijiyeen booskooda Finalka kaddib markii ay dhaliyeen goolkii labaad ee ciyaarta waxaana shabaqa gaaray Lacazette daqiiqadii 50-aad ee ciyaarta natiijada ciyaarta ayaana noqotay 2-1 .
Gameiro ayaa ciyaarta ka dhigay 2-2 kaddib caawin uu mar kale ka helay Rodrigo daqiiqadii 58 aad ciyaarta.
Kooxda Gunners ayaa sii laba jibaartay weerarkooda iyaga oona la yimid labo gool oo kale waxaana labada goolba ka dhliyey Aubameyang oo caawa dhaliyey goolasha loo yaqaan sedexley.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka u dhexeeyey Kooxaha Velencia iyo Arsenal ayaa ku soo idlaatay 4-2 balse wadarta goolasha ee labada kulan ayaa ku soo dhamaaday (7-3)
Dhinaca kale kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Eintracht Frankfurt iyo Chelsea ayaa ku soo idlaaday bar-baro 1-1, balse rigoorayaal 4 iyo 3 waxaa ku badisay Kooxda Bules.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Chelsea waxaana u dhaliyey goolkaas Loftus-Cheek kaddib caawin uu ka helay Eden Hazard daqiiqadii 28 aad ee ciyaarta.
Markii dib la isagu soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Frankfurt ayaa la timid goolka bareejada ee ciyaarta waxaana u dhaliyey Jovic daqiiqadii 49-aad ee qeebtii dambe ee ciyaarta.
Dadaalo badan oo ay ciyaartoyda labada dhinac sameeyeen uma suurta galin in ay la yimaadaan gool ugu dambeena kulanka ayaa ku doo dhamaaday 1-1.
Waxaa loo baahday 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada kooxda midkoodna ay u garaan finalka tartanka Europa League.
15-kii daqiiqo ee hore, Bules waxaa soo maray labo jaanis oo gool loo filan karay halka Frankfurt dhankooda aya heleen labo fursadood oo gool loo maleesan karay.
Guud ahaan daqiiqadihii dheeriga ee ciyaarta lagu daraya ayaa soo dhamaaday xili ayna waxba iska badalin natiijo ciyareedka kulanka oo lagu hishiiyey bar-baro 1-1.
Ugu dambeen waxaa lagu kala baxay Rigoorayaal kooxda Chelsea ayaana ku soo baxday rigoorayaal 4-3 iyaga oona Finalka la ciyaari doono Kooxda Arsenal.
Liverpool iyo Tottenham inay Finalka u soo baxaan waxaa ka caawiyay Lambar isku mid ah "No.27"
Shan waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal xalay gaartay Final-ka Europa League... (Maxay ka dhignayd saddexleeydii Aubameyang?)